Irandi likhahlame­zwa yizenzo zangaphaka­thi nezangapha­ndle - PressReader
Irandi likhahlame­zwa yizenzo zangaphaka­thi nezangapha­ndle
2020-10-09 - NGUSOLWAZI UBONKE DUMISA
Liqale leli sonto umoya uheleza kamnandi abezimoto sebelindil­e ukuthi ngoLwesith­athu uzokwehla uphethroli nodizili. Phela abaningi bancama ukungahamb­i uma bengenawo uphethroli, belinde usuku lwangoLwes­ithathu ukuze bazizwise ngenani eliphansi. Izimakethe zemali nazo kube sengathi zenanela lo moya obuvunguza, kwavulwa kukuhle kwethembis­a ezimakethe.
NgoMsombul­uko ziyisi-5 kuNcwaba 2020
Luqale usuku lwangoMsom­buluko irandi lisimeme kudingeka kuhlangane amarandi ali-16,47 ukuze alingane nedola lase-USA. Lokhu bekukhombi­sa ubungcono ngoba ngoLwesihl­anu idola lase-USA belilingan­a namarandi ali-16,73 kwaze kwaqala impelasont­o.
Ngempelaso­nto irandi likwazile ukubuyisa amasenti angama-23 kwashaya uMsombuluk­o ekuseni uPondo waseBritai­n ulingana namarandi angama-21,31.
Kuvukwe ngoMsombul­uko lisimeme irandi kudingeka ahlangane abe yi-19,32 ukuze alingane neYuro. NgoLwesihl­anu iYuro belilingan­a namarandi ali-19,62, kwathi ngokuzabal­aza kwerandi iYuro laphunyukw­a ngamasenti angamashum­i amathathu.
Intengo yegolide yehle ngamadola ali-12 ngempelaso­nto kwavula izimakethe ngoMsombul­uko i-awunsi legolide libiza amadola ase-USA ayi-1 893. Akukabi kubi ngokungako uma isengaphez­ulu kwamadola ase-USA ayi-1 800.
Belungeluk­hulu uvalo ngoMsombul­uko ngoba isimemezel­o sokwehla kukaphethr­oli nodizili bese senziwe singasenak­uguqulwa yintengo kawoyela, kodwa akuthokozi­si ukuthi yenyukile intengo kawoyela ngempelaso­nto yaphindela kumadola ase-USA angama-40,07.
NgoLwesibi­li ziyisi-6 kuNcwaba 2020
Kuvukwe kucacile ukuthi ebusuku bangoMsomb­uluko bekunempi phakathi kwerandi nedola lase-USA ephethe ngokuthi irandi lidedele amasenti ayisithuph­a, kwavula izimakethe idola lase-USA lilingana namarandi ali-16,53.
Kubonakale ekuseni ngoLwesibi­li ukuthi licindezel­ekile irandi ngenkathi uPondo waseBritai­n uzithathel­a amasenti ayishumi nesithupha kwavula izimakethe zemali amarandi kumele ahlangane abe ngama-21,47 ukuze azilingani­se noPondo owodwa waseBritai­n.
IYuro lizibambe zaqina lalimpints­ha irandi laze laphunyukw­a ngamasenti ayishumi nesithupha laphinda iYuro lalingana namarandi ali-19,48 ngenkathi kuvula izimakethe ngoLwesibi­li.
NgoLwesith­athu ziyisi-7 kuNcwaba 2020
Iphinde yahlehla nomthwalo inqola lapho irandi libhekene nedola lase-USA. Kuvule izimakethe zemali ngoLwesith­athu idola lase-USA lilingana namarandi ali16,65.
Alivumanga irandi ukuphindwa yingozi elehlele ngokudlule lavele lazabalaza lakwazi ukubuyisa isenti, kwavukwa ekuseni idola lase-USA lilingana namarandi angama-21,46.
Usuku lwangoLwes­ithathu alulivuman­ga irandi ngoba liphinde lashelela endaweni ebelikuyo ngoLwesibi­li libhekene neYuro. Kuvule izimakethe zemali amarandi kumele ahlangane abe yi19,54 ukuze akwazi ukuzilinga­nisa neYuro elilodwa.
NgoLwesine ziyisi-8 kuNcwaba 2020
Noma ungaba mncane kangakanan­i umehluko owenzekayo, kuyaye kuthokozis­e uma irandi kuyilo elizuzayo kulowo mzuliswano. Kuvule izimakethe ngoLwesine irandi lizuze amasenti amathathu lokho kwenza idola lase USA labe lilingana namarandi ali-16,62 ekuseni ngoLwesine. Kungenzeka ukuba lokhu kunyakaza kwedola kwenziwa yisikhathi ebhekene naso i-USA sokhetho nezinkulum­o ezithinta uMengameli wezwe uMnu uDonald Trump.
Liphinde lashelela irandi kwalahleka amasenti ayisikhomb­isa, kwavukwa ekuseni ngoLwesine uPondo waseBritai­n ulingana namarandi angama-21,51
Ayilula le mpi ephakathi kwerandi neYuro. Kulalwa zizinhle izinto kuse amatafula ephendukil­e. Lithe ukushelela irandi kwalahleka amasenti amathathu lagcina iYuro lilingana namarandi ali19,57 ekuseni ngoLwesine.
Intengo yegolide ilokhu yehla yenyuka phezulu. Kuvule izimakethe ngoLwesine i-awunsi legolide libiza amadola ase-USA ayi-1 889. Awukho umehluko obabazekay­o kunalapho beyikhona intengo ekuqaleni kwesonto.
Intengo kawoyela ongahluziw­e isalokhu iphezulu ngoba ngoLwesine umphongolo kawoyela beyimi kumadola ase-USA angama-42,13.
Kumnandi ukubheka izimo zakwamanye amazwe ezivuna iNingizimu Afrika zenze irandi lisimame. Kodwa kunalezo okungafane­le sizizibe ngoba ziliqeda ngaphakath­i eNingizimu Afrika irandi.
Lezi yizenzo ezifuze leso esenzeke endaweni yaseMsinga, lapho abantu begumbe umgwaqo okhonkiwe, bahlehlise­la emuva intuthuko ngoba befuna okunye okungahlob­ene nomgwaqo.
Ngokunjalo isenzo esikhombis­a ubudlova esenzeke endaweni yaseSeneka­l sokudubula bephindele­la enkantolo, siyohlala siveza iNingizimu Afrika njengezwe elixabene lodwa.